Solutions – NETPRO GPS Solutions
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Excavators, Backhoe Loaders, Bulldozers, Skid-Steer Loaders, Motor Graders, Crawler Loaders, Trenchers, Scrapers, Common Dump Trucks တွေမှာ Engine Hour, Travelling Hour, Idling Hour, Engine Temperature, Engine RPM, Fuel Level, Fuel Consumption နဲ့ Service Maintenance Alarm တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီသိဖို့လိုပါတယ်…
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Tractors, Harvesters တွေမှာ Engine Hour, Fuel Level, Fuel Consumption, ထွန်ယက်ခဲ့တဲ့ ဧက, ရိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ ဧက တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီသိဖို့လိုတယ်..
ယာဉ်များစွာကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာ ဘယ်ယာဉ်ကို ဘယ်အချိန် ဘာ Service တွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်း ပြဿနာတစ်ရပ်ပါ…NETPRO GPS Solutions ရဲ့ Fleet Maintenance Control ကတော့ ယာဉ်တစ်စီးရဲ့ ပြင်ဆင်စရိတ်နဲ့ ပြင်ဆင်ချိန်ကို လျော့ချပေးနိုင်တယ်..လဲရမယ့် Spare Parts တွေကြိုဝယ်ထားဖို့နဲ့ Spare Parts တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ကြိုတင်တွက်ချက်ထားနိုင်တယ်…ဒီစနစ်ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့
သစ်သီးဝလံ၊ သားငါး၊ ဆေးဝါးပို့ဆောင်တဲ့ အအေးခန်းကားတွေမှာ လမ်းတစ်လျှောက် Temperature အပြောင်းအလဲကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့၊ အအေးမလုံလောက်ရင် အပို Compressor တွေအလိုအလျောက်မောင်းနှင်းဖို့နဲ့ အအေးခန်းတံခါးအဖွင့်အပိတ်ချိန်တွေဘယ်လောက်ကြာခဲ့သလဲဆိုတာတွေ သိဖို့လိုပါတယ်….
တန်ဖိုးကြီးကုန်စည်များ ပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာ NETPRO GPS Solutions ရဲ့ E-Lock System သုံးမှ လုံခြုံမှာပါနော်…
YBS ယာဉ်လိုင်းများစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ NETPRO ရဲ့ Solutions အသစ်လေးပါ…
👉 Location အတိအကျသိမယ်…
👉မှတ်တိုင်ရောက်ရင် အလိုအလျောက်အော်ပေးတဲ့ စနစ်ပါတယ်..နောက်ရပ်မယ့်မှတ်တိုင်ကိုလည်း ကြိုတင်အသိပေးနိုင်တယ်…
ကျောင်းသားမိဘတွေအတွက်ရော၊ ကျောင်းသားတွေအတွက်ရော၊ ကျောင်းအတွက်ပါ အစဉ်ပြေစေမယ့် ကျောင်းကားစီမံခန့်ခွဲတဲ့ စနစ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
👉 ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို ID.card စနစ်ဖြင့် မိမိစီရမယ့်ကျောင်းကားကို သတ်မှတ်ပေးထားနိုင်ခြင်း။
👉 အတက်/အဆင်းလုပ်သွားသော အချိန်နှင့် နေရာများကို မှတ်တမ်းထားရှိနိုင်ခြင်း။
ယန္တရားဌားရမ်းတဲ့လုပ်ငန်းများအတွက် လွယ်ကူစွာ စီမံနိုင်တဲ့ NETPRO GPS Solutions
👉Engine Hour အတိအကျသိအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်…
👉ငှားသွားတဲ့ဂျုတီပြည့်တာနဲ့ Engine နှိုးမရအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်…
👉ဂျုတီကြေးထပ်ရမှ Engine ပြန်နှိုးလို့ရအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်….
Eco Driving or Driver Behavior/Driving Style ဆိုတာ Driver တွေရဲ့ ယာဉ်မောင်းနှင်ခဲ့ပုံကို တိုင်းတာတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်..ဥပမာ…သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက်ပိုမောင်းခဲ့သလား? အရှိန်ဆောင့်တင်ခဲ့သလား? ဘရိတ်ဆောင့်အုပ်ခဲ့သလား? အကွေ့တွေမှာ အရှိန်မလျော့ပဲ ကွေ့ခဲ့သလား? စက်နှိုးပြီး အချိန်ဖြုန်းခဲ့သလား? စသည်တို့ကို တိုင်းတာပြီး Driving Score သတ်မှတ်ပေးတဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်…
ယာဉ်တစ်စီးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်မှာ လောင်စာဆီက ၃ ပုံ ၁ ပုံနေရာယူထားပါတယ်…နောက်ပြီး နှစ်စဉ် transportation company တွေမှာ 20 %၊ construction company တွေမှာ 30 %၊ Mining company တွေမှာ 40 % လောက် ပျှမ်းမျှလောင်စာဆီဆုံးရှုံးမှုရှိနေပါတယ်..ဒီလိုအလေအလွင့်တွေကို လျော့ချဖို့ဆိုရင် Fuel Monitoring လုပ်ဖို့လိုပါတယ်..